Yeyiphi inkqubo etshintsha iMicrosoft Money? - Imicrosoft
Eyona > Imicrosoft > Ukuphuculwa kwemali kaMicrosoft- indlela yokujongana nayo
Ukuphuculwa kwemali kaMicrosoft- indlela yokujongana nayo
Yeyiphi inkqubo etshintsha iMicrosoft Money?
Kukho isizathu esifanelekileyo sokuba iMicrosoft Excel ibe sisicelo sespredishithi esikhethiweyo kuye wonke umntu ukusukela oko yaphuhliswa kwixesha langaphambi kwe-Intanethi, kodwa kuxhomekeke emsebenzini ekufuneka uwenze ngeespredishithi zakho, kusenokubakho ezinye iindlela kwi-Excel ezingcono zokuhlangabezana neemfuno zakho. . Kwaye namhlanje siqokelele ezili-10 zezona zikhetho zibalaseleyo. Ngaphambi kokuba singene kwezona ndlela zibalaseleyo ze-Excel phaya, qiniseka ukukhala emnyango kwaye ubhalise kwisiteshi sethu seYouTube! Iindlela ezi-3 eziphambili ze-Excel! 1.
AmaSpredishithi eGoogle AmaSpredishithi eGoogle yindlela echanekileyo ye-Excel. Okokuqala, simahla. AmaSpredishithi asekwe kwilifu, oko kuthetha ukuba unokwabelana kwaye ubeke izimvo kumashiti akwi-Intanethi ngaphandle kwentsebenziswano yexesha lokwenyani.
Imbali yohlaziyo olunzulu, efanelekileyo kumaqela asebenza kwi-G-Suite, abasebenza ngokuzithemba kuhlahlo-lwabiwo mali kunye nokuqala, kwaye ukusukela ukuba i-Google AmaSpredishithi ixhotyiswe nguGoogle, ungathatha ithuba lokuqhubekeka kweminye imisebenzi yedatha engafumaneki kwi-Excel. I-tradeoff kukuba ndilahlekile ezinye zezona zinto zibalaseleyo ze-AI ze-Excel, kwaye abanye abasebenzisi bathi kunzima ukwenza i-spreadsheet zibukeke zilungile ngokuqhwanyaza kweliso. Ukuba ufuna ukwenza nangaphezulu nge-Google AmaSpredishithi, amaSpredishithi angcono sisifundo esikwi-Intanethi sokuLungisa isiXhobo! 2.
ISmartsheet yinto efikelelekayo, esekwe kwilifu esekwe kwi-Excel yabasebenzisi abafuna ukutsala idatha kwimithombo yangaphandle kwaye bajike amaspredishithi abe kwiideshibhodi ezilula zokufunda. Iqala nje ngeedola ezili-14 ngenyanga kwaye ilungile kubaphathi beprojekthi kunye nolawulo lwedatha kumaqela amakhulu, kwaye ikwabandakanya iitoni zezinto zokusebenza ezinemveliso ezinje ngetshathi yeGantt kunye neKhanban ezenza ukuba idatha yakho ibe lula kakhulu ukuba ifundwe kwaye iqondwe ngabasebenzisi beSmart Sheet bathanda ukungabinamthungo. ukufikelela kwezixhobo ezininzi kanye njengeetacos zabo. 3.
Iphepha le-Zoho Ngephepha le-Zoho likuvumela ukuba ufikelele kumaxwebhu kwizixhobo zakho, uhlele iifayile ezininzi ngaxeshanye, kwaye usebenzisane ngexesha lokwenyani. Kusimahla kubantu abasebenzisa ukuya kuthi ga kwi-5GB, kwaye ke izicwangciso ziqala kwi- $ 2 ngenyanga, ukhetho olukhulu kubasebenzisi beZoho CRM abasebenza ngaphandle kweGoogle Suite. Ukugcinwa okuzenzekelayo kunye nembali yenguqulo ngokuqinisekileyo yenza ukuba iZoho Sheet ibe sisikhombisi esomeleleyo, kodwa eyona nto iphambili kukuba abasebenzisi be-Excel abanamava banokungasithandi isixhobo esisekwe kwiwebhu ngolu hlobo esingenayo yonke into esebenzayo ye-Excel.
Ngoku makhe sijonge kwiziko ledatha le-3 elijolise kwezinye iindlela ze-Excel. I-Stackby idibanisa ezona zispredishithi, iziseko zedatha kunye nee-API zeshishini kwiqonga elinye.
Ihlala ixabisa i $ 5 ngomsebenzisi ngenyanga, kodwa ukujonga zonke izivumelwano zamva nje, jonga inkcazo yeli nqaku okanye undwendwele appsumo.com/brows! Ukuba ungumthengisi, iarhente, okanye ishishini elincinci, yeyona ndlela ingcono yokucwangcisa, yokuququzelela, yokufumana idatha kunye nokulawula iimfuno zomsebenzi wakho, uStackby ngokuqinisekileyo sisixhobo sakho. Ukuphumelela kwayo kukuvumela ukuba uzenzele ngokupheleleyo iinxalenye ezothusayo zokuhlaziya ispredishithi.
phanda indawo exe
Kwaye ungasebenzisa i-Stackby's real-time metrics ezinje ngohlalutyo lwegama eliphambili le-SEO, isizukulwane esikhokelayo, kunye nokunye ukwenza okusemandleni akho xa kulula. Jonga inkcazo yenqaku kwibhlog yethu ngeendlela ezisixhenxe onokuthi uzenze ngeStackby. 5.Airtable Ngelixa lobuchwephesha imveliso yemodyuli, i-Airtable ikuvumela ukuba wenze i-spreadsheet kwaye usebenzise iifomula kuyo yonke into ukusuka kulongezo olulula ukuya kwimisebenzi esengqiqweni.
Kusimahla ngezicwangciso ezihlawulelweyo ezilinganisela ukusuka kwi- $ 10 ngenyanga kwaye zilungele ukuyila, ukuthengisa, imveliso / i-UX, ulawulo lweprojekthi kunye neelayibrari zetemplate. Ungasebenzisa i-Airtable njengenye indlela ye-Excel yokwenza i-spreadsheet ezisebenza kunye neenkcukacha ze-Askiller. Ungaguqula idatha ibe zii-kanbans kunye neekhalenda kwaye usebenze kunye kwiitafile ezininzi ngexesha lokwenyani.
Elinye icala elinokubakho ngenxa yangaphakathi kwi-Excel kukuba i-Airtable isekwe kwilifu ngokupheleleyo, ngoko ke i-Airtable ayifikeleleki ngaphandle kweintanethi- isixhobo esivelisa imveliso njengo-Evernote, kodwa usenokungazi iTafile zeNotion. Xa isiza kuyo, iNotion sisixhobo esihle esikufutshane ne-Excel njengoko inika izibonelelo eziphezulu ze-nced, yonke into yoku-cwangcisa ulwazi kunye nolwakhiwo lobuchule obuthathe ilizwe ledijithali ngoqhwithela. Kwaye simahla ngezicwangciso zokugcina ezonyukayo eziqala kwi- $ 4 ngenyanga.
Ukuba unomdla wokufumanisa ngakumbi, jonga kwiLuhlu lweNqaku lokuKopela iphepha kwiibhlog yethu enxulunyaniswe nenkcazo yenqaku. Okulandelayo, makhe sijonge kwimithombo emibini evulekileyo ye-Excel. 7.
Umphuhlisi we-EtherCalc, oku kulungile kuwe. I-EtherCalc inokubanjelwa ngokwakho ngokukhuphela ikhowudi kwiseva yakho yenza iakhawunti ku-ethercalc.org.
Nge-EtherCalc, ungasebenzisana nabantu abaninzi ngexesha lokwenyani kwaye ukhuphele ispredishithi kwiindidi zeefayile, kodwa kukho ukusilela kweempawu eziphambili kwaye akusebenzi kwizixhobo eziphathwayo. Kodwa ukuba ufuna ispredishithi esilula ngaphandle kweGoogle / Microsoft Suite, i-EtherCalc ngokuqinisekileyo kufanelekile ukuba uyiqwalasele. Kwaye khange ndikhankanye ukuba SIMAHLA !? 8.
I-LibreOffice -Calc Nantsi enye into yasimahla, evulekileyo yomthombo we-Excel elungileyo kubaphuhlisi! I-LibreOffice yindawo egcinwe kakuhle ye-egt evulekileyo enika isixhobo esibizwa ngokuba yiCalc. Esi sixhobo sasimahla siyafikeleleka kubo bobabini abaqalayo kunye nabasebenzisi be-Excel abanamava. Abaqalayo banokungena kwiprojekthi ngaphandle kwexesha kunye nenye yeetemplate zabo, ngelixa abasebenzisi abanamava baya kufumana izixhobo ezingaphezulu ukuphucula umdlalo wabo.
ikhowudi yempazamo 0x8008005
I-Calc ilungile kubasebenzisi abafuna ukubamba ngokwabo i-spreadsheet zabo, kodwa banokucaphukisa abantu abangafuni ukukhuphela kunye nokufaka isoftware yedesktop ukuzama nje. Okokugqibela kodwa kungaphelelanga apho, makhe sijonge ezi-2 zokugqibela kwi-Excel ezizezinye9. I-NumeriNumbers yindlela eyahlukileyo ye-Mac kuphela ye-Excel evumela abasebenzisi ukuba basebenzisane ngexesha lokwenyani nakwii-PC xa kwabelwana ngazo nge-iCloud okanye ngeBhokisi.
Kusimahla kwiikhompyuter ezininzi zeMac kwaye kulunge kakhulu kubasebenzisi beApple abangafuni kulwa nejika le-Excel lokunyuka. Ngelixa amanani engenazo zonke izinto ezigcweleyo ze-Excel, abasebenzisi bayayiqonda into yokuba yehlisa isithintelo ekungeneni ekusebenziseni amaspredishithi. Ukuba ufuna ukungena kulawulo lwedatha, isenzo ukuba ufuna ukukhanyisa ngokukhawuleza iprojekhthi, jonga ibhlog yethu yeNombolo, edityaniswe kwinkcazo yenqaku. 10 kwi-IntanethiNgokuqinisekileyo siza kwindlovu esegumbini: iMicrosoft isungule I-Excel ekwi-Intanethi kwaye isimahla! I-Excel ekwi-Intanethi inikezela uninzi lweempawu ezifunwa ngabasebenzisi be-Excel, kubandakanya ukugunyazisa ngokubambiseneyo kunye nabanye abasebenzisi.
Icala elisezantsi, nangona kunjalo, kukuba ngaphandle kweakhawunti ehlawulelweyo yeOfisi 365, ufumana kuphela i-5GB yokugcinwa kwefayile kwi-OneDrive simahla, kwaye ulahleka ezinye zezinto eziphambili njengokudala iitshathi zepivot kunye nokukhuphela iifayile ze-CSV. Kodwa kwakhona, isimahla kwaye yeyona ilungileyo kubalandeli be-Excel abazinikeleyo abafuna ukusebenza efini. Ke sesiphi isixhobo osithandayo? Sazise ngokuphawula apha ngezantsi kwaye ubhalise kwisiteshi sethu se-YouTube!
Ngaba iMicrosoft Money isekhona?
IMoneyspire yiEnye imali yeMicrosoftkudala ukhangela. Joyina bonke abantu kwihlabathi liphela esele betshintshile ukusukaImali yeMicrosoftkwiMoneyspire isoftware yezemali yokulawulaimali. IMoneyspire yeyona ilungileyoenye indlelaukuyaImali yeMicrosoft!
Windows 10 Amaqhosha oku ibingumba ophikisayo kakhulu kule minyaka imbalwa ngoku kwaye omnye wabaxhasi bezitishi endinabo apha, ewe isixeko scdkeys, bendizisebenzisa ngokwam iminyaka kwaye isizathu kukuba bendikhe ndayijonga xa Ngaba uthethathethwano lokuqala lwaxoxisana nabo. Ndithe, 'jonga, izitshixo zakho kufuneka zibeyinyani ukuba aziyonyani. Andifuni kwanto endidibanisa nawe. 'kwaye ke bandithumele izitshixo ezimbalwa, kodwa andifuni ukubathemba. Ndatshintsha ukusuka kumsebenzisi omtsha ndaya kwiakhawunti eyahlukileyo ndaze ndathenga izitshixo ndaza ndazivavanya ngokukodwa kwaye xa bekwiminyaka emibini edlulileyo babezizitshixo zokuthengisa- eso isiphelo umsebenzisi anelayisensi yezitshixo wena kunye onazo Sebenzisa iiPC zethu, ngakumbi ukuba singabadlali ... kwaye ngakumbi kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo ndikhe ndabona imiyalezo efana 'neeScdkeys zithengisa izitshixo zelayisensi yevolumu ongafanele uzithenge, ayenzelwanga' umsebenzisi wokugqibela ' kwaye banala magqabantshintshi ngokufanelekileyo nakwabanye Windows 10 abathengisi abaphambili, kodwa abachanekanga ngezitshixo ze-SCD apho isitshixo selayisensi yevolumu yenzelwe iinkampani apho ziya kukhupha ilayisensi enye kwaye ezo nkampani zisebenzise iphepha-mvume elifanayo ukuhambisa wonke umntu unokusebenzisa iisistim zabo awayezisebenzisa ukonga ixesha labo, kodwa nemali, apho bafumana eli qhosha lelayisensi yevolumu.
Ngoku kukho abathengisi be-ebay abathengisa ezi layisenisi kwaye ngokungekho semthethweni kodwa loo ntetho yanele, ndiza kuthenga ezinye iilayisensi offebay kwaye ndithenge ezinye iimvume zezitshixo ze-SCD kwaye ndisebenzise ezo layisenisi kwi-pc emva kwam apho sinokujonga khona Ukunyaniseka kwala maphepha-mvume okukuxelela okwenzekayo nangaphaya kokuba ndibize iMicrosoft ndibabuze ngeelayisensi zanamhlanje ukuba singaya phambili sikufunele iinyani, ke nantsi eyokuqala ibay key esiyifumene apha malunga nemizuzu engama-20 Ndiyithengile kwakukhawuleza kakhulu ngoko ndiyakrokrela ukuba i-eBay sele iluhluza olu luhlu kwaye ibathintela ukuba bangathengiswa kwiwebhusayithi yabo, nangona sifumene umyalezo kwaye sifumene isitshixo ukuze ngoku sikhuphe eso sitshixo kwaye sibone ukuba sithini Ke isitshixo sethu sokuqala esincinci se-eb ssel apha sisiphumo se Windows 10 rtmprofessional n ke ayisiyiyo nephepha-mvume kodwa ilayisensi yokubiza Kukho umahluko apha kwaye kukuphela kokusebenza kwezinye windows kwaye ndicinga ukuba ifuna okwahlukileyo Ukufakwa kweewindows kodwa eyona nto ibalulekileyo kukuba uMqulu iMacnow Mac uthetha amaqhosha okuvula amaninzi ngenxa yoko oku akujoliswanga kumajelo okuthengisa amaqhosha ebay, into esiza kuyenza ngoku kukuthenga ngokukhawuleza esinye isitshixo se-ebay kwaye ubone ukuba kuvela ntoni Umthamo iilayisensi zeMac, zizinto ezimbini ezahlukeneyo abathengisi be-eBay, izitshixo ezibini ezahlukileyo ndiza kuthi ukuba ufuna ukufumana isitshixo kwi-eBay, qhubeka kwaye sathenga nje isitshixo sethu sokuqala, izinto zentengiso lilayisensi yomsebenzisi wokugqibela, kodwa asizukuma apha. Ndineetoni zezitshixo ezahlukileyo ezivela kule webhusayithi kule minyaka idlulileyo kwaye siza kugqogqa iphepha lonke lezitshixo kwaye jonga ubunyani bazo nganye nganye kwaye njengoko usiya kwezinye izitshixo Kukho ukujija kancinci apha kwaye ayizizo zonke izitshixo ezisisiseko windows 10 ezinye zazo zi windows 8.1 kwaye eyona nto yile, ezi zizitshixo zokuthengisa kwaye into elungileyo apha ungafumana windows 8.1 windows 8 kunye neefestile ezisi-7 zasimahla kuhlaziyo lweWindows.
Ke ezinye zezitshixo zinokuba ziinguqulelo ezahlukeneyo, kodwa ezo nguqulelo ziyahlaziywa kwaye into elungileyo kukuba zonke zizitshixo zentengiso ekugqibeleni lixesha lokubeka la magama agwenxa kwifowuni yeMicrosoft kwaye ubone ukuba la maqhosha ayinyani enkosi ngokufowuna kuMicrosoft enkosi. ukubiza inkxaso yeMicrosoft i-pc evela ku-facebook kwaye umhlobo wam uthe kufuneka ndijonge ukuba ii-windowswindows 10 zam zilungile, ke ii-windows 10 ziyasebenza kuyo m kuyo ziyasebenza kodwa umhlobo wam uthe kufuneka ndibukele ukuba yintoni eyona nto iphambili Kuya kufuneka ujonge ukuba kunjani xa uthenga ngathi abanye abantu bathenga amaqhosha kwi-ebay kwaye ayizizo izitshixo zeMicrosoft ngoko ke mna kuphela ukuba iwindow yakho sele ivuliwe awuyidingi isitshixo kulungile ke leyo ulungile enkosi ke eyam windows ithi yenziwe yasebenza kwaye ilungile kwilayisensi yedijithali ndihlala ndiyibukele, ndinike imizuzu embalwa ibryano negama lakho lokugqibela liza kuba lilula, ewe ndinaso isitshixo apha, ukuba ufuna nje ukusijonga uyabona ukuba oku kulungile, akufuneki ifuneke. Ndiqinisekisa nje izinto ezimbalwa kuwe kwaye ndiqiniseke ukuba isixhobo sakho silungile kwaye uBryan kuya kufuneka ndikuxelele ukuba ukuba inkqubo yakho iyasebenza ngokusebenzisa ilayisensi yeDigitalline iya kuhlala ivuliwe kule khompyuter kay kule pc kwaye kufuneka ufumane malunga Ungakhathazeki, ukuze yonke imisebenzi Windows 10 izakuvulwa kwaye ungasebenzisa isixhobo sakho ngaphandle kobunzima kwaye ufikelele kuyo yonke imisebenzi yayo kwakhona ewe enkosi mfondini kulungile andizukuchitha xesha lakho kwakhona enkosi mfondini wamkelekile I-brianand ke apho ivela microsoftsupport ngokwabo bathi ukuba iiwindows 10 zenziwe zasebenza akufuneki ukuba ukhathazeke kwaye ndothukile kuba khange nditsho ukuba ndiyajonga, ndiyithengile le ndawo yentengiso ye keyoff kwaye inokuba isitshixo ukuba abahlobo bam basebenzise isilumkiso malunga nezitshixo kwi-ebay kwaye ezingatshintshanga uh, iqela lenkxaso yabathengi lihleli nje gt, jonga, ukuba iiwindows zenziwe ukuba usebenze sele ulungile, ngoku siza kuqhubeka siye ku-uh umzekelo yiya trustpilot, esi sisihloko esikhulu kuba ezinye abantu bandidibanise netrustpilot apho bafumana izitshixo ze-cd ngokomzekelo. Ndingathi abo bakhuphisana nabo banika uphononongo olungelulo olokwenyani kuba andikaze ndibenangxaki kwaye ndinabahlobo abaninzi abasebenzisa izitshixo ze-scd, asikaze sibe nangxaki ngenkonzo abangena kuyo kwiwebhusayithi rhoqo ngephepha endilisebenzisayo Paypal ukuthenga izitshixo kwaye zisiwe kwangoko ukubonisa isitshixo kunye nezitshixo zakho apho kwaye zonke izitshixo ziyasebenza kwaye nantsi eyona nto intle malunga nenqaku lanamhlanje ngezitshixo ze-std kuba ndiye kubo ndathi jonga ndizakwenza eli nqaku kodwa unganika isaphulelo esikhulu kubabukeli kwaye bathi jonga kunjalo? Ngenyanga yangoLwesihlanu oMnyama siza kunika isaphulelo sama-30 kubantu abasebenzisa isigqebhezana esivela kwi-bftycan.
Xa ndizithengile izitshixo namhlanje, ndisebenzisa le combo-for-one ukuze bathengise izitshixo ezibini zentengiso zitshiphu kancinci kunexabiso lokuthenga ezimbini nganye kwipakethi kwaye olu lukhetho olukhulu ukuba unayo ngaphezulu kokwakha iPC njengapha kunye neendleko esizibonayo ingaphezudlwana kwe- $ 9 enye Windows 10 Ilayisensi yePro kwaye zizitshixo zokuthengisa ke umgca osezantsi ngamaqhosha e-SCD abaxhasi beziteshi apha balungile. Ndongeza ikhonkco kwinkcazo engezantsi kunye nekhowudi yekhuphoni yenyanga leyo nangona ingoLwesihlanu omnyama. I-bftyc iyibiza ngokuba sisaphulelo samafutha esikhulu ngoNovemba xa ufumana isaphulelo sama-30 kwaye banazo nezinye iimveliso endinazo kwiOfisi ka-2016 endiyenzileyo ndisebenzisa iakhawunti yam yeMicrosoft, umzekelo xa ndenze iiPC okanye ndanyusa ikhompyuter yam, ndingakwazi ngokulula Ngena kule akhawunti kwaye ndine-office2016 ekhoyo apho, iyasebenza, inkonzo elungileyo kwaye ndiyavuma ngenkxaso-mali apha kubuchwephesha Ewe, isixeko, ke ukuba unayo nayiphi na imibuzo okanye izimvo malunga nezitshixo zeCD kunye Windows 10, qiniseka ukushiya Amagqabantshintshi kwicandelo lamagqabaza apha ngezantsi, kodwa kukho enye into, kwaye kulapho ufumana iiPC ezindala ezinje ngeTaiwan, khumbula besisejunkyard kwaye sinezitshixo zeWindows 7 kwezi khompyuter zakudala xa ufuna ukufumana isitshixo simahla.
Kuyenzeka ukuba uphinde usebenzise ii-Windows 7 ezindala ngebhodi yomama uyibeke kwelinye icala, umzekelo ndikwazile ukuphucula le Windows 7 isitshixo Windows 10 kwaye khange ndibhatale Windows 10 ilayisensi kwaphela, ke kukho olo khetho kunjalo, abantu, sinombuzo wosuku uvela kuMnu. igesi enkulu kwaye ubuza i-lg cx ixhasa inqanaba lokuhlaziya eliguqukayo ngoku malunga ne-c9 ngoku zombini i-c9 kunye ne-uh cx zii-lg 4k 120 hertz oledtvss bobabini bayayixhasa kuba ibhakwe kwi-hdmi yimigangatho ye-2.1 ngoko kufanele andinangxaki, yinto nje yokuhlaziya i-firmware kunye nohlaziyo lwesixhobo esisetyenzisiweyo, nokuba yi-Playstation 5 okanye i-Xbox uthotho okanye ikhadi lemizobo le-PC, kuye kulo menzi ukwenza le TV ukuba isebenze ngokufanelekileyo ewe inokusebenza nokuba iyasebenza kwaye ithatha ixesha elingakanani ukuze isebenze ngumba owahlukileyo nakanjani Le Ngethemba lokuba uyawuphendula lo mbuzo kwaye ndiza kukubamba kwelinye inqaku lobuchwephesha kungekudala
Kutheni iMicrosoft Money iyekisiwe?
Imali yeMicrosoftIsoftware eyekisiweyo ayiyekangaIMicrosoft. Nangona isicelo siphelile, kunjalonangokuisebenza kwiWindows 10.NgoJanuwari 15. 2021
I-imeyile yokutshintsha i-imeyile
Molweni abasebenzisi, namhlanje ndiza kunibonisa indlela yokulungisa nokucima izitshixo zobhaliso ezingenanto. Okokuqala kufuneka senze ukuba zeziphi izitshixo zethu zobhaliso kwaye esi sisicelo esivela kumsebenzisi wam kunye nesininzi esigcinekileyo kwaye ithi ungayenza inqaku ukunceda ukutsala kunye nokuthintela zombini izitshixo ezaphukileyo, ukubetha i-mac yakho ngoluhlobo kwaye enkosi ngombuzo wakho , okokuqala ndisebenzise isoftware ezimbini eyiTrashregistry kunye neRegistry Booster. I-Soregistry yeyona nto ndiyithandayo ukuba le software indincedile ukujonga izitshixo ezingenanto ngaphakathi.
Ke xa ndicofa kuyo kabini ibonisa indawo yesitshixo ukuze ndikwazi ukujonga apho ikhoyo kwiilayisensi zam zesoftware ukuze ikwazi ukukhangela amaqhosha am kwizitshixo ezingenanto kudoti ongenanto izitshixo ezinesikhewu esibizwa ngokuba yimingxunya eyiyo ukuze isitshixo esingenanto Ukuzaliswa kwirejista yakho kunye nerejista yakho eyandisiweyo yokutsala iscreen sokufa ukulungisa ngesandla isicoci seyunithi, kunzima kakhulu ukujonga isithili ngasinye ukuba sikuluhlu lofakelo okanye ukuba sibalulekile okanye sifakelwe ispyware Kwirejista yam , Ezi ziifayile zisixhenxe kwirejista yam engenanto kwaye engenamsebenzi. Ke ngoko sisoftware elungileyo ukufumana isitshixo semigqomo yokuphinda usebenzise kwakhona ndiyivule ibhalise i-booster, isuka kwi-uni eluhlaza okwesibhakabhaka siskena kwaye ibonisa ukuba irejista yam yeRegistryStratus ine-Defragmentation ebaluleke kakhulu emva kokuba uyivavanyile, ke masiqale kuqala Ndicofa i-skscar siqala ukuskena Uxolo kwiingxaki zeengxaki ezintlanu ezifumene i-13 34 Ithi Amatshantliziyo amaCandelo e-Oal kwaye ufake ii-Ohthe zizonke zamaqhosha obhaliso enexabiso angama-37 akwisistim sakho isitshixo esilahlekileyo ngesilwanyana esingavumelekanga ngoko ke kubaluleke kakhulu ukubaluleka koloyiko lokuba kwi-pc yakho ukuze ungayifumani ngesandla kunye nendlela esebenza ngayo apha kwiqhosha le-H elisezantsi bla bla blah ke kuthatha ixesha ukuyifumana kwaye buyisela kwaye uyicime ukuba ucofa u 'Cofa u Lungisa', kwiShishini, kwiShishini, okanye iya kucoca ngokuzenzekelayo irejista yakho Ukulungiswa kugqityiwe ngoku Jonga ubudlelwane bam, Uthintelo lwesimo luphezulu kakhulu Impilo yam iphezulu ngoku enkosi ngolu hlobo lwe-booster booster. Kulungile, ukuba iPC yam isebenza izinzile kwaye iyakhawuleza.
Ke yeyiphi into yokupheliswa kwendlela yokuphucula ngoku ukuphucula ukusebenza kwenkqubo Kufuneka ucaphukise irejista yakho njengoko ungakhange uyenze kwihard drive yakho kwaye zonke izinto ezinje ngoku mva nje isakhelo sibaluleke kakhulu kumaqhosha esitokhwe ukwenza ubungakanani bakho bube buncinci kunye ne-HP yakho. iya kulungiswa kwaye intsebenzo inyuswe. Enkosi ngokubukela kwaye ukuba ufuna eli khonkco liluhlaza liyingozi ekhutshelweyo yolwazi kunye ne-PM kum kwaye undikhonze into enjalo kwaye ndiza kukunika isitshixo sesimahla salo mbulelo ngokujonga kwaye ndiyathemba uyonwabile IiVideos zam kwaye ndiyabulela kwaye ufundile ukuba undibhalele isicelo kwaye ndiyathemba ukuba uyawavuyela amanqaku am kwaye uhambe kakuhle
Ngaba iMicrosoft Money ilungile?
Ukupheliswa kweImaliyenye yezona zinto zisikwayo kwimveliso ephezulu eyenziwe emva kweenzame zenkampani zokunciphisa iindleko, eziqale ngoJanuwari.IMicrosoftithe ngo-Matshi yayininziukuyekaI-encyclopedia yayo ye-Encarta kwaye ikrwele imveliso yayo ye-Windows OneCare ye-antivirus.Juni 10, 2009
Molo, olu luphononongo lwenqaku lesoftware elivela kwiLandcom yeSoftware kwaye namhlanje ndiza kuvavanya iphakheji yezemali ebizwa ngokuba yiMicrosoft Money 2007. Ngoku kukho inguqulelo entsha ngo-2008 kwiwebhusayithi yeMicrosoft kodwa inguqulelo yeSATA endiyisebenzisayo, Ndiza kujonga. Ngoku inkqubo ilula kakhulu ukuyicwangcisa kwaye inoncedisi ekuncedeni ngencwadi yakho yobuqu yezemali, kulungile kwaye esi siscreen kwaye esi siscreen sam solwazi lwam kodwa ukwenza kube lula ndiza kuhamba ndiyokwenza ifayile entsha yemali entsha kunye nendawo ethile eyothusayo.
Vavanya ukuba kulungile ngoku lolu tyelelo ngaphandle kokuba uchaza ukuba njengoko uchaza zonke iisetingi zakho nayo yonke into yemali yeMicrosoft kwaye ufuna isazisi seWindows Live ukwenza imali kulungile ungasisebenzisa, kwaye ukuba awunjalo kukho ukhetho ukuba ungaseta iWindows Live ID, eyiMicrosoft Windows Live ID ofuna ukuyisebenzisa njengomfanekiso, kwaye ubuyise ulwazi lwakho kwiwebhusayithi kwiwebhusayithi yeMicrosoft. Xa ubatyikityile nge-ID yakho yeWindows yeWindows, ndihamba epasejini kwaye unokwenza i-ID entsha yeWindows yeWindows. Nje ukuba ezi ziye kwiscreen esilandelayo apho unokuseta khona zonke iiakhawunti zakho kwaye yonke into izakulunga Ke okokuqala kufuneka sidibanise iakhawunti yebhanki kwaye yiyo kodwa ndingabakhetha kuzo zonke iibhanki ezixhaswa yinkqubo, kwaye ngenene, ukuba inkqubo yakho iyayixhasa ibhanki yakho okanye umbutho wekhredithi, ungazikhuphelela zonke iingxelo zemali ngqo ebhankini ukuze kunganyanzelekanga ukuba uphinde ulungelelanise yonke ibhalansi yakho nayo yonke imicimbi yakho ukuze ibhanki yakho ingabikho kuluhlu Unokhetho lokusebenzisa enye i-bhanki okanye umntu enze i-akhawunti ukuze bajonge i-akhawunti yokutshekisha kwaye eli lixabiso onalo kwaye eli lixabiso le ibhalansi yangoku yepomp ok ngoku ndifuna ukwenza Awunakho ukubala enye njengeakhawunti yekhadi letyala ok kwaye masithi ngumgca, likhadi letyala, izinto ezikhoyo ngoku kwinkampani, ngaba ungachaza yonke into kunye nawe, masithi ungamawaka amahlanu isixhenxe ikhulu elinamanci mane kwaye unayo Iidola zaseMelika kwi-itor okanye nayiphi na iapp okanye nayiphi na enye imali yeedola zaseMelika zilungile okanye ungabona iyuro xa ukwilizwe elinommandla we-euro, kulungile kwaye njengoko ethe kulungile ngoku unika ikhadi lekhredithi okanye likhadi lokutshaja kwaye ukuba uyafuna ukuhlawula ibhalansi epheleleyo kwaye inyanga nenyanga unganqakraza kuyo kwaye emva koko unokhetho lokuhlawula ibhalansi epheleleyo okanye iNyanga nganye ndinenqanaba lenzala, ukuba kukho inqanaba lentshayelelo, ingaba isebenza nini de ilunge kwaye ke kulungile ukuba inzala esisigxina ilishumi elinesibhozo kwaye izinga lokunciphisa liyi-0% Uthini umyinge opheleleyo wetyala kulawo amashumi amane anesihlanu amawaka ofuna ukuwavumela onke amaBhalansi ukuba alungile, ukuba ucofa ibhalansi ye-onauto kufuneka ungenise yonke imicimbi ibhalansi yakho yonke iakhawunti kwaye ukuba akunjalo kwaye unokuthi kongeze i-invoyisi kwikhalenda engafakwanga cwangcisa oku apha ukuba ufuna ukuhlawula loo invoyisi iphelela kwiimayile okanye ngamanqaku kuphela.
Kuzo zonke izinto zomlilo oqhelekileyo, nje ukuba unakho ukuseta zonke iiakhawunti zakho kunye namakhadi etyala kwaye emva koko ungaya phambili kwaye usete onke amatyala akho kwaye umvuzo wakho ulungile, apha cofa iNtsha Ungongeza entsha i-invoyisi okanye yongeza entsha kwaye ukuba umvuzo udlula ukuba unekhalenda yokubhalisa kwaye uyimbali, oku lula ngoku ukwenza lula ndiza kuyenza, kulungile into endizakuyenza yile ndiyicimileyo ifayile yovavanyo kwaye ndigqitha nje kwi-um yam iiakhawunti zam ezahlukeneyo. Kulungile le yiakhawunti yam yokonga kwaye ezi ziidipozithi zaloo mntu kwaye kulula kakhulu ukwenza okuninzi kunye nemephu kuyo yonke intengiselwano kuyo Kulungile kwaye emva koko unokubona zonke iintlobo zokuhamba kwemali kunye nokuhamba kwemali nayo yonke enye into kwaye Izinto zijongeka ngathi ndinazo kwiakhawunti yam yokujonga kwaye ayizibandakanyi ezinye zam. Iiakhawunti zam zokonga kudelta kwaye yinkqubo eyenze iingxelo ezininzi njenge z kwinyanga ephelileyo kwaye zilandelela iindidi ezahlukeneyo ukuze ube nayo kwiscreen sakho esiphambili xa ufuna imali oyichitha kwipetroli okanye kwivenkile yokutya okanye nantoni na esiyifunayo, emva koko ithi ngenene ngenene ngama-Askarticles e-AM kwaye lonke uncedo oludingayo oluza nenkqubo, ndiye ndacebisa ukuba nabani na ofuna ukujonga iimali zakhe.
Kulungile, olo yayisisicatshulwa senqaku lesoftware esivela kwi-softwareslandcom
Ngaba zikhona iziqwengana okanye izilungiso zeMicrosoft Money?
Kweli phepha kukho inani lamachaphaza, ukulungiswa kunye nokukhuphela kwiinguqulelo ezininzi zeMicrosoft Money. Ngaphambi kokufaka naziphi na ii-patches okanye izilungiso, qiniseka ukuba ugcina ifayile yakho yeMali yeMicrosoft. Ukusetyenziswa koku kulungiswa okanye iipatches kusemngciphekweni wakho- sukuzisebenzisa ngaphandle kokuba uqinisekile ukuba nobabini niyasifuna isicatshulwa kwaye niyayazi into eniyenzayo.
Yeyiphi eyona nguqulelo ibalaseleyo yeMali kaMicrosoft?
Yenzelwe iikhompyuter ezisebenzisa inkqubo yokusebenza ye-Microsoft Windows, kwaye iinguqulelo zeWindows Mobile zikwakhona (ziyafumaneka ngeMali 2000-2006 kwiinguqulelo ezikhethiweyo zeWindows Mobile, ukuya kuthi ga, kodwa kungabandakanyi, Windows Mobile 5.0). IMicrosoft Money iza kwiinguqulelo ezimbini zentengiso: iDeluxe, kunye neKhaya & amp; Ishishini.
Ngaba ikhona inguqulelo yasimahla yeMicrosoft Money Plus?
Idemo yeMicrosoft Money Plus 2008 17.0.1501415 iyafumaneka kubo bonke abasebenzisi besoftware njengokukhutshelwa simahla kunye nezithintelo ezinokubakho kwaye ayisiyiyo ingxelo epheleleyo yale software. Sivavanye iMicrosoft Money Plus 2008 17.0.1501415 ngokuchasene ne-malware ngeenkqubo ezahlukeneyo.
Ndingenza ntoni ngeakhawunti yeMali yeMicrosoft?
Ivumela abasebenzisi ukuba bajonge ibhalansi yeakhawunti yebhanki, benze uhlahlo-lwabiwo mali, kunye nokulandela umkhondo weendleko, phakathi kwezinye izinto. IMicrosoft Money iyafumaneka kwiikhompyuter nakwiifowuni eziphathwayo. Iimpawu zayo zibandakanya ukuhlawulwa kwetyala kwi-Intanethi, iikowuti zotyalo-mali ezikwi-Intanethi, ukukhuphela ingxelo ngokuzenzekelayo, ukungenisa iifayile zedatha, isiguquli semali, kunye nekhaltyhuleyitha yobambiso.